‘အိမ္တြင္း မွာ မထားသင့္ တဲ့ ကံဆိုးေစ တဲ့ အရာ (၆) မ်ိဳး’ – Shwewiki.com
သင့် အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား? ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား? အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား? “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလို ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။
အ ခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။ သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ပျက်စီးကျိုးပဲ့နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အိမ်ထဲမှာ မထားကောင်းဘူးဆိုတာတော့ အားလုံး လက်ခံပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ပျက်စီးရပ်တန့်နေတဲ့ နာရီက မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေ ဖြစ်စေတယ်လို့လည်း အယူအဆရှိပါတယ်။ အချိန်ကို ညွှန်ပြတဲ့ အရာတွေဟာ အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်နေရပါမယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ရပ်တန့်နေမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုတဲ့သူတွေရဲ့ ဘဝတိုးတက်မှုလည်း ပိတ်ဆို့ရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်။
ရပ်တန့်နေတဲ့နာရီနဲ့ အလားတူစွာပဲ နှစ်ကုန်ပြီး ဒိတ်အောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေကို ဆက်လက်ချိတ်ဆွဲ ထားတာကလည်း ကံကောင်းခြင်းတွေဝင်လာဖို့ ပိတ်ဆို့စေပါတယ်။ အချိန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆို မှားယွင်းကျိုးပျက်နေတဲ့အတိုင်း အသုံးပြုတာက အိမ်လာဘ်တိတ်ပြီး အသက်တောင် တိုနိုင်တယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုကြပါတယ်။
Photo; Pixabay / we media